इटाली बीच रिसोर्ट्स: एक सारांश
इटाली, भू-मध्य सागर, लामो र वैविध्यपूर्ण तट संग एक देश घेरे। पूर्व मा, -Ionicheskoe को "इटालियन बुट को खुट्टा" नजिकै Tyrrhenian - - दक्षिण -Liguriyskoe पश्चिम मा Adriatic (यी सबै भू-मध्य सागर को भागहरु छन्): तट वरिपरि समुद्र विभिन्न तरिकामा भनिन्छ। अचम्मको कुरा छैन, समुद्र तट इटाली रिसोर्ट्स सँगै लगभग 6,800 किलोमिटर सुत्छन्। यो देश दुनिया मा शीर्ष छुट्टी गन्तव्यहरू बीचमा निश्चित छ। छैन 226 भन्दा कम तटों मानार्थ छन् निलो झण्डा।
परंपरागत इटालियन गाउँमा सुरक्षित क्षेत्रमा, अक्सर समुद्र माथि पहाडलाई मा, बीसौँ शताब्दीको पहिलो आधा, तटीय lowlands, नियम, malarial क्षेत्रमा थिए किनभने निर्माण गरेका थिए। , समुद्र द्वारा उपनगरहरुमा - त्यसैले, आज हामी देशी क्षेत्रमा स्थित ऐतिहासिक केन्द्र र आधुनिक समुद्र तट रिसोर्ट्स इटाली पाउन सक्नुहुन्छ।
Portofino र Cinque Terre लाग्यौं लोकप्रिय रिसोर्टमा सहर सूची। तिनीहरूले सधैं यात्री को ध्यान केन्द्र छन्। Cinque Terre मा होलीडेस परी कथा मनपर्छ। को चट्टानी तट एउटा सानो क्षेत्र मा इटालियन रिवेरा को, पाँच गाउँमा भएको एघारौँ शताब्दीमा निर्मित थिए।
होइन, यो छैन इटाली मा युवा रिसोर्ट्स छ, तिनीहरूले शान्त, तनावमुक्त छुट्टी मूल्यांकन गर्ने मान्छे को लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै, यो हाम्रो गतिशील 21 औं शताब्दीमा एक मान्छे, सभ्यता vortices देखि चुपचाप टाढा बस्ने तिनीहरूलाई चारै ओर कि सौन्दर्य र सौहार्द को आनंद जहाँ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ।
आज गाउँमा (गाउँ) को Cinque Terre को सूची मा विश्व सम्पदा साइटहरु यूनेस्को द्वारा एक रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज किनभने दृश्यहरु को शानदार सौन्दर्य को, साथै मध्ययुगीन वास्तु उपस्थिति को संरक्षण को एक उदाहरण। सबैभन्दा को बस्तियों र पर्यटक मनपर्ने को शानदार शायद Vernazza छ। को Cinque Terre वाहनहरु यातायात सबै ठाउँमा निषेधित छ।
इटाली अन्य धेरै लोकप्रिय र कुनै कम सुरम्य समुद्र तट रिसोर्ट्स, जो सूचीमा थप गर्न सकिन्छ: ओट्रान्टो को किनारा मा स्थित छ को Adriatic सागर, मा Tropea को Tyrrhenian सागर, ल्यामपेडुसा र Linosa, सिसीली को तट, Castiglione डेला Pescaia देखि 200 किलोमिटर दूरी मा स्थित।
ओट्रान्टो - ऐतिहासिक शहर। विगतमा तिनीहरूले युनानी र रोमी, Byzantines, Normans र Aragonese चलाए। यसलाई स्वागत यसको अतिथि मात्र एक आश्चर्यजनक बलौटे समुद्री तट, सफा र न्यानो समुद्र पानी, स्थिर सुन्दर छुट्टी वातावरण, तर पनि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव प्रतिबिम्बित रोचक ठाँउहरु।
इटाली बीच रिसोर्ट्स धेरै ठाउँमा अवस्थित छ। एक आश्चर्यजनक छुट्टी लागि धेरै अवसर प्रदान गर्ने द्वीप को एक श्रृंखला - को मुख्य भूमि टाढा छैन। यो खातामा लग्नु गर्नुपर्छ र त्यहाँ सधैं ठूलो मौसम हो भन्ने तथ्यलाई। छुट्टी सिजन वसन्त खुलेको छ र गिरावट मा समाप्त हुन्छ, तर समुद्र तट संग पैदल (यो RAINING छैन भनेर अनुमान लाउनुको) वर्ष को कुनै पनि समय उपयोगी हुन सक्छ।
यो पनि इटाली बीच रिसोर्ट्स लागि गर्मी मौसम को शिखर मा सबै लागि मूल्यहरू कम गर्छन कि यात्री (होटल आवास, भोजन र जस्तै) धेरै खुसी छ। तर, यो छ कि यो हुनत स्थानहरूको विकल्प भारी बाँच्न, प्रणाली देशमा "सबै समावेशी" होटल द्वारा अभ्यास छैन उल्लेख गर्नुपर्छ।
सामान्य मा दक्षिण, एक बिट उत्तरी भन्दा न्यानो हुन सक्छ, तर उत्तरी समुद्र तटीय रिसोर्ट्स कम रोचक र लोकप्रिय छन् कि होइन। उदाहरणका लागि, नाइस, पूर्वोत्तर तट मा स्थित, सबै भन्दा युरोप मा प्रसिद्ध मध्ये एक छ। (त्यहाँ जाने इच्छा कारण समीक्षाएँ जो) दक्षिणी इटाली लोकप्रिय रिसोर्ट्स केही अमाल्फी क्षेत्रमा पाउन सकिन्छ।
पोर्टो मा बिदाहरू (को Adriatic तट मा रिसोर्ट)
कसरी अविस्मरणीय गर्मी पारित गर्न: विचार
जहाँ भ्रमण मा Anapa जाने?
स्पेन जो तट आराम गर्न छनौट?
Bratislava - स्लोभाकिया को राजधानी
जापानी koi आक्षेप
थिएटर। Vakhtangov: मुग्ध पार्ने संगीतको र प्रदर्शन को समीक्षा
मालिश संस्थान र cosmetology पाठ्यक्रम ठेगाना
छोराछोरीको पार्क: विशिष्ट संरचना
"Evkabal" (बाम): प्रयोग, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन
Diencephalic सिंड्रोम: कारणहरू, लक्षण र उपचार तरिका
छुट्टै शान्ति के हो? ब्रेस्ट-Litovsk र बेसल विश्व
पखेटा ब्वाँसो: कदमले चरण आकर्षित कसरी?
Tolkien को महाकाव्य सागा "द ओर्डर ऑफ़ द रिंग्स": किताबहरु क्रम मा
रूस मा आमा दिवस
"Estrovel" "Tazalok", "klimonorma", "Inoklym" Analogs। रजोनिवृत्ति र यसका जटिलताहरू मा तयारी
क्रोम जूता - अधिकारीहरु को जूता र मात्र